gbakwunyere igwe akwa akwa, kacha mma yana onyinye a na-apụghị ịgbagha agbagha
gbakwunyere igwe ịkwa akwa
Mụta ịkwa akwa
Ụwa ịkwa akwa na-adọta ọtụtụ mmadụ. Na nke inwe ike ime mgbanwe ụfọdụ na uwe ma ọ bụ, nke ịkọwapụta atụmatụ nke gị na-abụkarị ihe na-ekwenye ekwenye. Yabụ, enwere ọtụtụ ndị kwa ụbọchị na-ekpebi ịzụta nke ha mbụ igwe akwa. Ndị ọzọ kwesịrị ịga n'ihu ntakịrị na maka nke a, ha ga-achọkwa igwe na-eme ka ọ dị ha mkpa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ihe nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma, yabụ echefula ihe niile anyị na-agwa gị taa. Site na igwe akwa akwa kacha dị ọnụ ala ma dị mfe maka ndị mbido, overlock ma ọ bụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, kedu nke ị ga-ahọrọ?
igwe akwa iji malite
Ọ bụrụ na ị na-achọ otu igwe akwa iji malite, n'okpuru ị ga-ahụ ụdị anọ dị mma maka ndị mbido ma ọ bụ ọrụ dị mfe:
Nlereanya Atụmatụ Ahịa
Onye na-abụ abụ nkwa 1412
-Ụdị stitch: 12
-Stitch ogologo na obosara: mmezi
- 4-nzọụkwụ akpaka bọtịnụ
- Njirimara ndị ọzọ: kọmpat imewe, akwa akwa, zigzag 133,24 €
Lee nkwaMara: 9 / 10
-Ụdị stitch: 16
-Stitch ogologo na obosara: Mgbanwe ruo 4 na 5 mm n'otu n'otu
- Akpaaka bọtịnụ 4 nzọụkwụ
-Njirimara ndị ọzọ: nkenke ziri ezi na zig-zag, ngwa ngwa, ụkwụ presser 137,75 €
-Ụdị stitch: 31
-Stitch ogologo na obosara: Mgbanwe ruo 5 mm
- Akụkụ ndị ọzọ: LED, ụkwụ na-agbanwe agbanwe, njide spool metal 189,99 €
Lee nkwaMara: 10 / 10
-Ụdị stitch: 40
-5 oghere bọtịnụ akpaka, 1 nzọụkwụ
- Akụkụ ndị ọzọ: Ọrụ maka patchwork na quilting 171,31 €
Ọ bụ ezie na ọ bụghị na tebụl dị n'elu, ị nweghịkwa ike ịhapụ ya Igwe akwa akwa Lidl, ọmarịcha ihe nlere iji malite mana onye nnweta ya nwere oke na ngwaahịa ụlọ ahịa.
Na ụdị ọ bụla dị na tebụl ị ga-abụ nke ziri ezi, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere nke ọ bụla n'ime ha, n'okpuru ebe a, anyị ga-agwa gị isi njirimara nke ọ bụla n'ime igwe akwa akwa ndị a aghọwo nhọrọ zuru oke maka ndị na-akwa ákwà. chọrọ ịmalite na ụwa ịkwa akwa ma ọ bụ maka ndị na-achọ nhọrọ ọnụahịa dị mma:
Igwe nkwa egwu egwu...
Ọ bụrụ na ị na-achọ a isi akwa igwe na nwere ihe dị mkpa atụmatụ na-amalite, na Igwe ịkwa akwa onye ọbụ abụ Nkwa 1412 ga-abụ nke gị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime ọrụ dị mfe dị ka hemming ma ọ bụ zipping, yana bọtịnụ, ga-adabara gị mma. Na mgbakwunye, ọ bụ igwe dị mma na ọnụahịa dị mma. Ọ dị mfe iji yana dị ka anyị na-ekwu, ezigbo ma ọ bụrụ na ị na-amalite. N'agbanyeghị na ọ nwere stitches 12 dị iche iche, ị ga-agbakwunye festoons eji achọ mma.
Ọnụ ahịa ya na-abụkarị gburugburu 115 euro nwee ike bụrụ nke gi ebea.
Omenala 2250 -...
Ọ bụ otu n'ime igwe akwa akwa kacha ere, yabụ, anyị enweelarị data dị mma n'ihu. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ yana ihe dị mkpa mgbe ịmalite na ụwa ịkwa akwa. Ọzọkwa, ọ bụghị naanị nke ahụ, ebe ọ bụ na ngụkọta nke stitches 10, ọ ga-abụkwa nke zuru oke mgbe ị nwere ihe ndị bụ isi. Yabụ, ị gaghị adị mkpụmkpụ. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe, yabụ ị nwere ike ibufe ya dịka mkpa gị si dị.
Ọnụ ego igwe akwa a ga-amalite bụ ihe dị ka 138 euro y ị nwere ike ịzụta ya ebe a
Igwe akwa akwa ALFA,...
Igwe ndị ọzọ dị mkpa bụ Alfa Style 40. Karịrị ihe ọ bụla n'ihi na ọ dị nnọọ mfe, maka ndị niile na-enwechaghị echiche nke ịkwa akwa. Kedu ihe ọzọ, Ọrụ ya zuru oke dị ka eriri akpaka, bọtịnụ bọtịnụ na nzọụkwụ anọ. Ọ nwekwara ọkụ LED, yana agụba iji bee eri. Cheta na e nwere stitches iri na abụọ tinyere scallops abụọ a na-achọ mma. Kedu ihe ga-abụ isi maka ọrụ ndị a na-ahụkarị.
N'okwu a, ọnụahịa ahụ na-ebili ihe dịka 180 euro. Zụta ya ebe a.
Nwanna CS10 igwe...
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado onwe gị na nke mbụ igwe eji akwa akwa, nke a ga-abụ ihe nlereanya gị kacha mma. Ọ bụghị n'ihi na ọ bụ eletrọnịkị ọ gbagwojuru anya iji, nke dị iche. Na mgbakwunye na nke kacha isi stitches, ị nwekwara ike ịmalite gị nzọụkwụ mbụ na ụwa nke patchwork nakwa dị ka ihe mkpuchi. Ọ dị mfe iji dị ka ịhọrọ ọrụ anyị ga-arụ, ogologo na obosara nke ihe nkedo ọ bụla na ọ bụ ya.
Ihe dị mma bụ na mgbe ị maara otú e si arụ ọrụ na ihe kachasị mfe, ọ na-enyekwara gị ohere ịga n'ihu ntakịrị, n'ihi na ọ zuru ezu. Ihe a niile maka ọnụ ahịa ihe 165 euro. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike zụta ebe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ọzọ ụdị nke igwe akwa nwanne, tinye njikọ nke anyị hapụrụ gị.
igwe akwa akwa dị ọnụ ala
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ nhọrọ kachasị ọnụ ala, mgbe ahụ ị nwere igwe ịkwa akwa kacha ọnụ ọ bụ ezie na anyị ahọrọla ụfọdụ ụdị nwere nnukwu uru maka ego:
-Ụdị stitch: 13
-Stitch ogologo na obosara: Ọ bụghị mmezi
- 4 ọrịa strok
-Ihe ndị ọzọ: agịga abụọ 115,36 €
-Ụdị stitch: 17
- Ogologo ogologo na obosara: nha 2
- Njirimara ndị ọzọ: ikuku akpaaka, ọkụ, ogwe aka efu Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Onye na-abụ abụ dị mfe 3221
-Ụdị stitch: 21
-Oghere bọtịnụ akpaaka 1 oge
- Njirimara ndị ọzọ: ọkụ, ogwe aka efu, eriri akpaka 179,99 €
Lee nkwaRịba ama: 9/10
Alfa na-esote 40
-Ụdị stitch: 25
- Akpa bọtịnụ oghere 1 nzọụkwụ
- Akụkụ ndị ọzọ: na-eguzogide, ịdị mfe nke eriri 232,99 €
igwe Jata MC695...
Anyị na-eche otu igwe akwa dị ọnụ ala ihu. Jata MC695 nwere ngụkọta nke ụdị stitches iri na atọ. Ọ dị oke igwe dị mfe iji yana ọkụ mgbe a na-ebufe ya. Ọ nwere ọtụtụ ngwa ngwa, yana ọkụ agbakwunyere. Zuru okè maka ndị na-amalite kamakwa maka ndị chọrọrịrị ihe ọzọ. Ikekwe isi ihe na-adịghị mma bụ na ogologo na obosara nke stitch adịghị edozi.
Ọnụ ahịa ya enweghị ike ịgbagha ma ọ nwere ike ịbụ nke gị 113 euro. ị chọrọ ya Zụta ya ebe a
Igwe akwa akwa...
Ọ bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma. Echiche ndị ahụ kwenyere na ọ bụ igwe akwa iji malite, kamakwa maka ndị chọrọ ihe ọzọ na obere oge. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ego ntakịrị, nke a bụ ihe nlereanya gị. Ọ nwere 21 stitches na ogologo na obosara regulator. Kedu ihe ọzọ, ga-enye 750 stitches kwa nkeji, ogwe aka efu na ọkụ agbakwunyere.
N'okwu a, anyị na-akwụ ụgwọ maka ego dị ukwuu na nke ahụ bụ na ọ bụ ezie na ọ bụghị ọnụ ala dị ka ụdị abụọ gara aga, Singer Simple bụ ụdị ntinye dị egwu nke nwere ike ịbụ nke gị maka 158 euro na ị nwere ike. zụta ebe a.
ALFA na-esote 40+ mmiri ...
Igwe akwa ọzọ nke nwere àgwà dị elu bụ nke a. Ụdị ọhụrụ nke Ngwa igwe alfa Osote. Enwere ọtụtụ ụdị dị na nso a nwere njirimara ndị yiri ya. Ma na nke a, a na-ahapụ anyị na Alfa Next 45. Ọ dị mma maka ndị na-amalite ma ọ bụ ndị na-achọkwa ka igwe akwa akwa mbụ ha dị ogologo. Na 25 stitches na 4 ịchọ mma scallopsHa ga-emezu ihe ị tụrụ anya ya.
Alfa na-esote 45 bụ ihe nlereanya nke ọnụahịa ya ihe dị ka euro 225 na ihe i nwere ike zụta ebe a. Nnweta ha nwere oke ma ọ bụrụ na ha enweghị ngwaahịa mgbe ịzụrụ ya, ị nwere ike zụta ụdị ha ọ bụla site na ezinụlọ na-esote ebe ọ bụ na ha yiri nke ukwuu n'ihe gbasara njirimara.
Toyota SPB15 - Igwe...
Nhọrọ ọzọ dị ọnụ ala bụ nke a. Nke igwe akwa akwa toyota SPB 15 Ọ bụ otu n'ime nnukwu nhọrọ. Ọ dị kọmpat, dị mfe ma nwee ụdị stitches iri na ise. N'ime ha, anyị na-egosipụta ụdị ihe ịchọ mma 15, hem stitch yana zig-zag. Ọ nwekwara ihe ndọghachi azụ nke bara uru.
Ọnụ ahịa igwe akwa Toyota SPB15 bụ naanị euro 112 ma ị nwere ike zụta ebe a.
igwe akwa akwa ọkachamara
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ a igwe akwa akwa ọkachamara, n'okpuru anyị na-enye gị ụfọdụ n'ime ndị kasị zuru ezu ụdị maka ndị na-achọ uru na mma mma ọrụ:
Bernett Sew&Gaa 8
-Ụdị stitch: 197
-7 eyelets 1 nzọụkwụ
- Njirimara ndị ọzọ: Quilting, Patchwork, 15 agịga ọnọdụ 349,99 €
Onye na-agụ egwú Curvy 8770
-Ụdị stitch: 225
-6 eyelets 1 ọnụ
- Akụkụ ndị ọzọ: Ụdị mkpụrụedemede, eriri smart Ọnụ ahịa adịghị
Lee nkwaMara: 8 / 10
Onye na-abụ abụ Starlet 6699
-Ụdị stitch: 100
-6 eyelets 1 nzọụkwụ
- Akụkụ ndị ọzọ: 12 oghere agịga, nhazi ígwè 279,99 €
Onye na-abụ abụ Quantum Stylist 9960
-Ụdị stitch: 600
-13 eyelets 1 nzọụkwụ
- Akụkụ ndị ọzọ: ọkụ ọkụ 2 LED, ọnọdụ agịga 26 749,00 €
-Ụdị stitch: 60
-7 anya anya -
Njirimara ndị ọzọ: Ngosipụta LCD, ukwu presser elu okpukpu abụọ 649,00 €
Mgbe anyị na-ekwu maka igwe akwa ndị ọkachamara, anyị na-edo anya na anyị na-ekwu okwu banyere okwu ndị ka ukwuu. Atụmatụ ndị ọzọ maka rụchaa ọrụ dịka ọkachamara. N'okwu a, Bernett Sew & Go 8 na-ahapụ anyị na ngụkọta nke 197 stitches. N'ime ha, 58 bụ ihe ịchọ mma. Ị ga-ahụkwa ngụkọta nke ọnọdụ agịga iri na ise na ịdị elu okpukpu abụọ nke ụkwụ presser. Ọ na-eguzogide nke ukwuu ma nwee ogwe aka efu.
Ọnụ ahịa igwe akwa ọkachamara a bụ 399 euro ị nwere ike zụta ebe a.
Onye na-abụ abụ Curvy 8770 -...
Obi abụọ adịghị ya, anyị na-eche ụzọ ọzọ nke nhọrọ kacha mma ihu. Tupu ika na anyị niile maara na mgbe niile na-egosi anyị nhọrọ kacha mma. N'okwu a, na-ejikọta ya na ngụkọta nke 225 stitches. N'ezie ekele maka nke ahụ ị nwere ike ikwe ka echiche gị felie. Na mgbakwunye, ọ nwere ụkpụrụ, na-agbanwe agbanwe ogologo ogologo na obosara na na akpaka winding usoro. agịga ugboro abụọ na ụdị bọtịnụ asaa… kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịrịọ?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike zụta Curvy Singer ebe a
Anyị ji ngụkọta nke 100 stitches malite ugbua. Ya mere, anyị nwere ike nwetaworị echiche na ọ bụ igwe ọzọ nke ga-enye anyị ohere ịga n'ihu mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Ogologo na obosara nke ha bụ mgbanwe. Na mgbakwunye, ekwesịrị ikwupụta na o nwere Ọnọdụ agịga 12 yana ogwe aka efu na ọkụ LED. Ọbụghịdị akwa akwa kacha sie ike ga-egbochi ya.
Agbanyeghị na ọ bụ igwe akwa akwa ọkachamara, Singer Starlet 6699 nwere ike ịbụ nke gị naanị 295 euro. Want chọrọ ya? zụta ya ebe a
Onye na-abụ abụ Quantum Stylist...
N'ezie, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ndị ọkachamara na-akwa ákwà, anyị enweghị ike ichefu Singer Quantum Stylist 9960. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ihe niile i bu n'obi na-etinye n'ime omume. Ọ nwere ụdị stitches 600, ma ogologo ya na obosara ya nwere ike gbanwee. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ya otu n'ime ndị kasị ike na ahịa.
Pricegwọ ya bụ 699 euro ma na nloghachi anyị ga-enweta otu n'ime igwe akwa kacha mma na ahịa na ị nwere ike ịzụta site ebe a.
Alfa Model 2160-igwe ...
A na-ahapụ anyị na ụdị igwe Alfa nke nwere njirimara zuru oke, yana ihuenyo LCD nke dị mfe iji. Ọ ga-abụkwa zuru oke maka akwa akwa, yabụ ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na nsonaazụ dị mma. Threader akpaaka, yana stitches 60 na ụdị bọtịnụ asaa.
Ọnụ ahịa igwe akwa ọkachamara a bụ euro 518 ma ị nwere ike zụta ebe a.
Otu esi ahọrọ igwe akwa akwa mbụ m
Ịhọrọ igwe akpa akwa m nwere ike ọ gaghị abụ ọrụ dị mfe. Anyị niile na-eche maka igwe dị mma, na-eguzogide ọgwụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ma na mgbakwunye na nke a, enwere nkọwa ndị ọzọ ị ga-eburu n'uche.
Kedu uru anyị ga-enye ya?
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ajụjụ ndị na-emekarị ugboro ugboro, ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị ga-eji ya naanị maka ọrụ ndị kachasị mkpa, mgbe ahụ ọ baghị uru itinye nnukwu ego na igwe ọkachamara ọkachamara. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na ị gaghị eji ọkara nke ọrụ ya. Ugbu a, ọ bụrụ na-amasị gị ụwa ịkwa akwa, azụtala igwe nkiti. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ ọkara, na ọ nwere ọtụtụ ọrụ na ọ na-enye anyị ohere ịga n'ihu ntakịrị. Ma ọ bụghị ya, n'ime obere oge, ọ ga-abụ ihe ochie maka mkpa anyị.
Ma echegbula ma ọ bụrụ na ị maghị ka esi edozi ya na mbụ, ebe a ị nwere ike ịmụta ịkwa akwa dị nnọọ mfe na doro anya.
Kedu njirimara igwe akwa akwa mbụ m kwesịrị inwe?
ụdị stitch: Otu n'ime ihe ndị a ga-eburu n'uche bụ stitches. Maka ọrụ ndị bụ isi, igwe nwere ole na ole ga-adị mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, họrọ ndị kacha stitches. Ogologo ogologo dị mkpa mgbe ị na-arụ ọrụ na akwa akwa. N'ihi ya, anyị ga-achọ ogologo stitches. Obosara nke stitches dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ dị ka tinye eriri na-agbanwe ma ọ bụ nkedo.
eyelet: E nwere nnọọ ole na ole dị iche n'etiti ha. N'ezie, ịme bọtịnụ bọtịnụ na nzọụkwụ anọ abụghị otu na ịme otu. Ihe ị ga-eburu n'uche ebe ọ bụ na nkọwa a anyị nwere ike ịme bọtịnụ dị iche iche na uwe.
agịga ọnọdụ: Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke igwe ịkwa akwa, ka anyị ga-enwekwu nhọrọ mgbe ị na-ahọrọ ụdị akwa akwa dị iche iche.
igwe ika: N'ozuzu, ọ ka mma mgbe niile ịtụkwasị obi na ụdị ndị a ma ama. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na anyị maara na anyị na-akwụ ụgwọ maka àgwà ọma. Na mgbakwunye, anyị ga-enwe ọrụ nka na aka yana akụkụ dị iche iche nke anyị chọrọ.
Potencia: Biko mara na igwe nwere ike na-erughị 75W adịghị mma maka ịkwa akwa akwa.
Cheta na igwe akwa akwa nwere ọtụtụ uru. Otu n'ime ndị bụ isi bụ inwe ike ịchekwa euro ole na ole na uwe. N'ezie, ị ga-enwe nkụda mmụọ mgbe ụmụaka tụfuru uwe ọhụrụ ma ọ bụ mgbe ị na-aga ụlọ ahịa ma ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla na-egbo mkpa gị. Ugbu a ị nwere ike ịgbanwe ihe a niile, jiri ntakịrị ntachi obi na nraranye. Kpamkpam:
N'ọnọdụ ndị a, ekwela ka ọ ju gị anya igwe akwa ochie ebe ọ bụ na ha dị mgbagwoju anya ijikwa na taa a na-eji ha eme ihe dị ka ihe ịchọ mma karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na mmefu ego bụ nsogbu gị, ị nwere ike ịmalite ịzụrụ ihe mgbe niile igwe akwa akwa nke abụọ.
Igwe akwa akwa vs ulo oru akwa akwa
Know maara isi ọdịiche dị n'etiti igwe ịkwa akwa na ụlọ ọrụ ịkwa akwaya? Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nkọwa ọzọ nke ị kwesịrị ịma tupu ịmalite ịzụrụ otu n'ime abụọ ahụ. N'ebe a ọzọ enwere ọtụtụ ihe ị ga-amata.
igwe akwa akwa ụlọ
Dị ka aha ya na-egosi, igwe ịkwa akwa ụlọ bụ nke nwere ọrụ ndị bụ isi maka ọrụ ndị a na-ahụkarị. N'ime ha, anyị na-akọwapụta ọrụ ịkwa akwa nke anyị niile maara. Dozie uwe ụfọdụ, dụ akwa, akwa akwa ma ọ bụ zipa.
Igwe akwa akwa ụlọ ọrụ
Ezubere ha maka ọrụ kacha sie ike. Ha na-ekwe nkwa ụfọdụ ọrụ ọkachamara karịa yana ọtụtụ ndị na-eguzogide ọgwụ. Ihe mkpuchi ma ọ bụ eriri dị mma maka ụdị igwe a. Ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na ndị enyi ya. Na mgbakwunye na ihe a niile, a ghaghị ikwu na mgbe anyị chọrọ igwe nke ụdị a, ọ bụ n'ihi na anyị nwere nnukwu ọrụ kwa ụbọchị na n'ihi na anyị enweelarị ahụmahụ karịa ụwa nke ịkwa akwa. E bu n'obi na-arụ ọrụ na nnukwu mpịakọta nke akwa akwa ma ọ bụghị naanị ịnọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, kamakwa ịnọ n'ụlọ.
Ha na-enye anyị ọsọ ọsọ n'etiti 1000 na 1500 stitches kwa nkeji, n'ezie ọ nwekwara dịtụ njọ akụkụ. Ọ ga-eri ike karịa igwe eji eme ihe na ha nwere ike ime mkpọtụ karịa ndị ọzọ.
Ebe ị ga-azụta igwe akwa akwa
Taa, anyị nwere ọtụtụ ebe anyị nwere ike ịzụta igwe akwa akwa. N'otu aka, anyị nwere ụlọ ahịa ngalaba, hypermarket yana ụlọ ahịa ebe ị nwekwara ike ịhụ ngwaahịa ndị ọzọ maka ụlọ. N'ezie, na mgbakwunye na nke ahụ, ị ​​nwekwara isi ihe gọọmentị na-anọchite anya ụdị igwe ọ bụla.
Mana ọ bụrụ na ịchọghị iji ọtụtụ awa site n'otu ebe gaa na nke ọzọ, ịre ahịa n'ịntanetị bụ nhọrọ ọzọ pụrụ iche. Ibe dị ka Amazon Ha nwere ụdị ụdị ọ bụla., yana yana njiri mara nke ọma yana ọnụ ahịa asọmpi. N'ezie, ị nwere ike ọbụna chekwaa euro ole na ole ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa anụ ahụ.
ngwa igwe ịkwa akwa
Igwe akwa akwa niile nwere ọtụtụ ngwa. N'ezie, nke a nwere ike ịdabere na ụdị ihe nlereanya. Agbanyeghị, akụkụ mapụtara ga-abụ otu n'ime ntọala nke ịzụrụ anyị. Mgbe a bịara ịzụrụ ha, ọ bụrụhaala na ị na-ele anya na nkọwa nke igwe gị. N'ebe ahụ, ha ga-agwa gị ụdị kpọmkwem ị chọrọ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ na-akwado ndị zuru ụwa ọnụ.
Ọzọ anyị ga-ahụ ngwa igwe ịkwa akwa kacha nkịtị:
N'agbanyeghị na anyị chere na ọ ga-ejere anyị ozi na eri anyị nwere, ọ naghị ezuru ya. Mgbe ụfọdụ, anyị chọrọ agba ndị ọzọ, maka nhọrọ mbụ na-abata n'uche. Cheta na ọ dị mkpa inwe polyester eri nakwa dị ka embroidery. N'ụlọ ahịa ebe ịzụrụ igwe, ha ga-enwekwa ha n'aka gị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ igwe enweelarị ha, ọ bara uru iburu ha n'uche. Ekele maka ha, ị nwere ike ịme ụdị seams dị iche iche. Ị nweghị ike ịnọ na-enweghị ha!
Ọ bụrụ na ọkpọ ụkwụ ma ọ bụ eri bụ isi, gịnị banyere agịga? Ụfọdụ na-eji igwe anyị, ma cheta na ụfọdụ nwere ike ịla n'iyi n'ụzọ. Ya mere, mgbe niile nwere aka ọtụtụ agịga. Ọ kacha mma ịhọrọ agịga maka ọtụtụ akwa dị iche iche Na ezi mma.
Tinyere bobbins, ọ kacha mma ịchọ ikpe. N'ụzọ dị otú ahụ ị gaghị atụ uche ọ bụla. Ọ ka mma inwe ihe dị ka afọ 12 ma ọ bụ 15. Buru nke ahụ n'uche!
ngwa na mkpọ
Ọ bụrụ n’ịhụ na ịchọghị ịnwe ngwa ndị a n’otu n’otu, ị nwere ike ịzụrụ ihe a na-akpọ mkpọ. N'ime ya, ị ga-ahụ ihe kachasị mkpa na mgbakwunye na ụfọdụ mkpa n'ụdị dị iche iche iji dabara ọrụ anyị. Ị nwekwara ike ghara uche ndị cutters na teepu ka ịlele.
23 kwuru na «»
Julaị 31, 2018 na 6:34 pm
Ana m egbu oge n'etiti nwanne cs10, nwanne fs40, onye na-abụ abụ 6699, alfa comoakt 500
Julaị 31, 2018 na 6:35 pm
Kedu nke ga-akacha zuru oke?
August 1, 2018 na 9:35 am
Maka uru maka ego, Singer Scarlet 6699 bụ onye mmeri. Ọ bụrụ na ịchọrọ nke zuru oke, mgbe ahụ Compakt 500E Plus mana ọnụahịa ya dị elu.
Jenụwarị 2, 2019 na 1:43 pm
Ndewo afo ohuru!!
Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka biko, enwere m nwa nwanyị dị afọ 8 na-ahụ n'anya ejiji na ịmepụta uwe kemgbe ọ bụ obere, ọ bụ ihe na-esi na ya pụta, ọ bụ agụụ ya, ụbọchị ole na ole gara aga ka m hụrụ. igwe akwa akwa lidl na ihe dị ka euro 78 karịa ma ọ bụ ụmụ nwoke anaghị m echeta nke ọma, okwu bụ na ọ bụ nke ikpeazụ na ekwenyeghị m ịzụta ya n'ihi obere nkọwa.
Ọ bụghị na m chọrọ iji ego buru ibu, ma nke ọma, achọghị m ịzụrụ ihe na-emecha mee ka ọ na-esiri m ike ịchọta ngwa, wdg, n'ihi na anyị bi na Canary Islands na ihe niile na-aga nwayọọ nwayọọ. Amaara m onye na-abụ abụ n'oge ndụ m niile, ọ na-adị mgbe niile n'ụlọ m, ọ ga-amasị m ịnweta nke dị mma n'ihe gbasara ịdịmma na ọnụahịa na efu m ma ọ bụ onye na-agụ egwú ma ọ bụ onye ọzọ ka ị kwadoro. Anyị chọrọ ka ọ jiri ya mụta na iji mee ka anyị nọrọ nwa oge ka anyị na-aga n'ihu, ị nwere ike inyere m aka ma kwado ụfọdụ biko.
Jenụwarị 2, 2019 na 2:56 pm
Site na ihe ị na-agwa m, ihe nlereanya m na-akwadokarị bụ Nkwa Singer, igwe akwa akwa dị mfe ma a pụrụ ịdabere na ya nke dị mfe iji na nke ga-eme ka nwa gị nwanyị nwee ike ịzụlite nkà ya na ụwa ịkwa akwa.
Ka ị na-enweta ahụmahụ, ị ​​ga-enwe ike ime ka ịwụ elu na ụdị zuru ezu karị, ma ịmalite, nke a bụ nhọrọ kachasị akwadoro n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ na-erekwa ya ugbu a.
Abụọ 22, 2019 na 3:41 pm
Ndewo, enwere m igwe akwa akwa, mana ugbu a achọrọ m ịkwa akwa ihe ndị ọzọ, nke m nwere anaghị aza m, ahụla m ọtụtụ na ịntanetị mana enweghị m ike ikpebi, achọrọ m enyemaka gị, enwere m obi abụọ. gbasara Nwanna cx 7o, ma ọ bụ onye na-agụ egwú STARLEYT 6699. . daalụ nke ukwuu.
Kedu onye n'ime ha abụọ na-akwa akwa ka mma?
Machị 1, 2019 na 10:04 ụtụtụ
N'ime ụdị ndị ị na-atụ aro, ha abụọ bụ nnukwu nhọrọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkachamara. Igwe na-abụ abụ zuru oke ka o nwere ọtụtụ stitches (100 vs. 70).
Banyere Nwanna CX70PE, ọ bụ ihe nlere anya patchwork yana ọ dịkwa ihe dị ka euro 50 dị ọnụ ala karịa onye na-abụ abụ, yabụ ọ bụrụ na iji ihe nlereanya a gboo mkpa gị, ọ bụ oke nhọrọ ọzọ.
Eprel 9, 2019 na 9:10 am
Ana m achọ igwe akwa akwa nke na-adị ngwa ngwa ebe ọ bụ na m na-eji nne m ochie ọkachamara alfa na refrey ịkwa akwa na ndị m hụrụ n'aka ndị ọrụ ibe na-adị ngwa ngwa.
Achọrọ m ya maka ịkwa akwa nkịtị mana ọ dịkwa ike nke nwere ike ịkwa akwa ihe dị ka leatherette. Ihe mmefu ego m dị gburugburu €200-400. Enwere ọtụtụ ụdị na ọtụtụ echiche nke na amaghị m ebe m ga-amalite. N'ime ndị nke ị na-adụ ọdụ ka m na-eburu n'uche na m na-achọ ọsọ, ike, na mgbanwe.
Eprel 9, 2019 na 10:47 am
Site n'ihe ị na-agwa anyị, ihe nlereanya nke nwere ike ịmegharị na ihe ị na-achọ bụ Singer Heavy Duty 4432. Ọ bụ igwe siri ike (anụ ahụ ya bụ ọla na efere ígwè), ngwa ngwa (1100 stitches kwa nkeji) na vasatail. (ị nwere ike ịkwa akwa dị iche iche ma nwee ụdị stitches 32).
Ihe kacha mma bụ na ọ dabara nke ọma na mmefu ego gị.
Eprel 16, 2019 na 9:55 am
Ụtụtụ ọma, enwere m mmasị ịzụta igwe ịkwa akwa ọhụrụ, ebe ọ bụ na nke m nwere, enweghị m ike ịdọrọ na elu okpukpu abụọ nke presser ụkwụ. N'elu ihe niile m na-akwa naịlọn teepu lined na owu ákwà, e nwere ụfọdụ ebe na m ga-ịkwa 2 iberibe oké naịlọn na owu. Na igwe m nwere ugbu a onye na-agụ egwú, nke na-arụ ọrụ nke ọma nye m, ma enweghị m ike ịdọrọ. Kedu igwe ị na-akwado?
Eprel 22, 2019 na 11:20 am
Kedu ka igwe gị ugbu a siri dị ike? Lelee ọrụ dị egwu nke onye na-abụ abụ iji hụ ma ọ dabara na mkpa gị.
Eprel 25, 2019 na 1:44 pm
ndewo, enwere m onye na-agụ egwú serenade nke m zụtara aka nke abụọ ma ugbu a na m etinyelarị aka n'ụwa a, achọrọ m ihe ọzọ, karịsịa maka akwa akwa siri ike na ime ọtụtụ ihe, gịnị ka ị na-adụ m ọdụ, m na-ele alphas. na masịrị m site na imepụta eziokwu, mana ọ ga-amasị m ịmara ndụmọdụ gị.
Eprel 26, 2019 na 11:00 am
Ndewo Oke Osimiri,
Na-amaghị ihe mmefu ego gị bụ, ọ na-esiri ike ịkwado gị ebe ọ bụ na nhọrọ dịgasị iche iche dị oke na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla € 150 dị elu karịa igwe gị ugbu a. Mana m ga-achọ ịma ma ịchọrọ imefu € 150, €200 ma ọ bụ € 400 iji nye gị nhọrọ nke ụdị igwe akwa kacha mma dabere na mkpa gị.
Site na ozi ị nyere anyị, naanị ihe m nwere ike iche bụ ịkwado onye na-agụ egwú siri ike ịkwa akwa akwa ndị ahụ siri ike.
Mee 2, 2019 na 1:04 pm
Achọrọ m inye enyi m nwanyị igwe akwa akwa maka ụbọchị ọmụmụ ya. Ọ gbasoro ịkwa akwa, imepụta ejiji na nkuzi ndị ọzọ ruo ọtụtụ afọ, mana enweghị m echiche gbasara ụwa igwe akwa akwa. Ọ chọrọ ya iji mee uwe nke ya ma tụgharịa echiche ya na ihe osise ya n'ime ihe a na-ahụ anya. Ọ ga-amasị m ka ọ bụrụ ihe dị ndụ, nke na-adịghị anọchi anya ọtụtụ ihe na oriri nke ọkụ eletrik. Kedu igwe ị na-akwado?
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị!
Mee 3, 2019 na 10:04 am
N'amaghị mmefu ego gị, ọ na-esiri anyị ike ịkwado igwe akwa akwa.
N'ọkwa nke gburugburu ebe obibi, ha niile na-abịa na-eji otu ọkụ ọkụ n'ọtụtụ ọnọdụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ọnụ ala dị oke ọnụ ka a ga-ahụ na ụgwọ ọkụ eletrik (anyị anaghị ekwu maka ikuku oyi ma ọ bụ oven, nke na-eri ọtụtụ ihe).
Ọ bụrụ na ị nye anyị oke nke ihe ịchọrọ imefu, anyị nwere ike inyere gị aka ntakịrị.
Mee 15, 2019 na 5:14 pm
Daalụ nke ukwuu maka azịza gị. Echefuru m kpamkpam ide mmefu ego, ọ na-aga n'etiti 150 ruo 300 euro.
Mee 16, 2019 na 9:55 am
Ana m edegara gị akwụkwọ gbasara ajụjụ gị gbasara igwe akwa ị ga-azụta.
Ebe ọ bụ na ịchọrọ ya dị ka onyinye maka onye nwerelarị ihe ọmụma banyere ejiji na ịkwa akwa, ọ kacha mma ịkụ nzọ na ihe nlereanya nke na-enye ụdị akwa dị iche iche. Maka nke ahụ, Alfa Pratick 9 bụ otu n'ime ndị na-eme ntuli aka kacha mma ị nwekwara ike inye. Na ị nwere ọtụtụ mmefu ego ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe akwụkwọ ịkwa akwa, ngwa ma ọ bụ ọbụna mkpuchi.
Ọ bụrụ n’ịgbatị obere mmefu ego gị n’ihu, ị nwere igwe igwe eletrọnịkị Compakt 500E nke na-enye ọtụtụ atụmatụ stitch ma nọkwa na otu egwuregwu ọzọ ma a bịa n'ịrụ ọrụ na ya.
June 18, 2019 na 11:07 am
Ndewo, enwere m mmasị ịzụrụ igwe akwa akwa nke na-akpa akara akara ma ọ bụ mkpụrụedemede. Ị nwere ike ịgwa m nke ihe nlereanya na-eme ya? Echiche kacha mma
June 18, 2019 na 11:17 am
Ana m edegara gị akwụkwọ maka ozi ị hapụrụ anyị na webụsaịtị igwe akwa anyị.
Site n'ihe ị kwuru, ihe kachasị akwadoro bụ na ị na-ewere igwe akwa maka Patchwork, ha bụ ndị na-enye nhọrọ kachasị mma ma a bịa n'ịkwado mkpụrụ akwụkwọ na ihe oyiyi dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, Alfa Zart 01 bụ ezigbo onye ndoro-ndoro anya yana n'okporo ụzọ. Ị nwere ike iji ya mee ihe niile.
Septemba 27, 2019 na 11:49 am
Ụtụtụ ọma, ọ ga-amasị m ka ị nye m echiche gị na igwe atọ m nwere echiche Practical Alpha 9 Elna 240 na Janome 3622 ma ọ bụ nke ị chere na ọ ga-abara m uru, daalụ, ana m eche nzaghachi gị.
November 10, 2019 na 10:24 pm
Ahụrụ m blọgụ gị n'anya, ọ na-enyere m aka nke ukwuu. Amalitere m ịmụ ịkpụ, ịkwa akwa na ime ụkpụrụ n'ihi na ọ ga-amasị m ịrara onwe m nye ya. Achọrọ m itinye ego na igwe dị mma nke na-adịgide adịgide ma bara uru maka uwe karịa ihe niile. Achọghị m ka m skimp na ya, ya bụ, ọ bụghị ndị kasị isi (ọ bụghị ndị kasị ọnụ na m ga-achọghị) nke ị na-akwado?
Daalụ nke ukwuu!!!!
November 11, 2019 na 8:41 am
N'onwe anyị, anyị na-akwado Alfa Pratik 9. Ọ bụ igwe na-akwa akwa na mbara ala nke na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ma ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ na ndị na-enweworị ihe ọmụma dị mkpa iji mee ka ọtụtụ n'ime ohere ya niile.
Septemba 2, 2020 na 2:59 pm
Ndewo, enwere m onye na-abụ abụ 4830c, mana ọ naghịzi arụ ọrụ nke ọma, nke ga-abụ otu ụdị, nke nwere njirimara yiri ya ma ọ bụ dịtụ elu, ugbu a, daalụ.
Ana m anabata ya usoro nzuzo *
Ebumnuche data: Njikwa SPAM, njikwa nkọwa.
Iwu: nkwenye gị
Nkwukọrịta nke data: Agaghị ezigara ndị ọzọ data ahụ ma ewezuga ọrụ iwu.
Nchekwa nke data: Ebe nchekwa data nke netwọk Occentus (EU) kwadoro
Ikike: Ị nwere ike ịgbachi, nwetaghachi ma hichapụ ozi gị n'oge ọ bụla.
Igwe eji akwa akwa Lidl
Igwe akwa akwa Alfa
Nwanna igwe akwa akwa
Igwe akwa akwa na-abụ abụ
Igwe akwa akwa Toyota
Igwe akwa akwa ụbọchị Prime
igwe akwa Friday oji
igwe ịkwa akwa ụbọchị cyber
Dee anyị ozi
Machineskwa akwa 2022 - Iwu nzuzo - Ozi gbasara kuki